kacdoonkii Barbaarta oo Maanta si Rasmi ah ugu fiday Gobola Cusub gaar ahaan Gobolka Sitti la jaarka ah ee Faafan.(Sawirro) – Xeernews24
kacdoonkii Barbaarta oo Maanta si Rasmi ah ugu fiday Gobola Cusub gaar ahaan Gobolka Sitti la jaarka ah ee Faafan.(Sawirro)
barbaarta Reer Wajaale, iyo Faafan,
Waxaa Maanta ka dhacay magaalada Wajaale ee gobolka Faafan isu soo bax uu hal qof kudhintey. Allah ha unaxariisto mujaahidka dhintay ayaa waxaa diley hogaan kusheega nabad galyada oo hadda ciidamada federaalku ay gacanta kuhayaan. Waxey shacabka magaaladu iska soo caydhiyeen dhamaan dibjiriintii dib ucurashada ku joogtey magaalada Wajaale.
Dhanka kale waxuu mudaharaad kasocdaa Haroorays oo Jigjiga iyo Wajaale udhaxey kadib markii gaadiidkii Jigjiga kabaxay oodhan la xanibay.
Waa wax lagu farxo in maanta reer Wajaale ay soo qaataan calankii xalaasha ahaa ee deegaanka, waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka deegaanka inay soo qaataan calankii xalaasha ahaa ee Soomaali-nimadu ka muuqatey markey isu soo baxayaan.
Dibad baxyaadda nuucan ah ayaa kuwa Mooraalka Dhalinta Gobolka Sitti oo ahaa kuwii horseeday kacdoonka kor u qaaddi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/05/Wajaalee.jpg 540 1105 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-05-08 15:47:552018-05-08 15:47:55kacdoonkii Barbaarta oo Maanta si Rasmi ah ugu fiday Gobola Cusub gaar ahaan Gobolka Sitti la jaarka ah ee Faafan.(Sawirro)
DEG DEG Mudaharaado Dhimasho keenay oo lagaga soo Horjeedo Madaxwayne Cabdi... Sababta Loo Diiday Barnaamijka Dib U Curashadda.